Fitsaboana orinasa - Digital Manufacturing Co., Ltd.
Amin'ny ankapobeny, marary rehetra dia raharaha fitsaboana manokana, sy ny fomba famokarana namboarina afaka hihaona ny fitakian'ny tranga ireo. Ny fampiroboroboana ny teknolojia fanontam-pirinty 3D dia natosiky ny mpitsabo fampiharana, ary koa mitondra fanampiana goavana reciprocally, ahitana ireo hetsika SIDA, prosthetics, maniry, mpitsabo nify, fampianarana ara-pitsaboana, ara-pitsaboana fitaovana, sy ny sisa.
3D pirinty manao asa moramora kokoa, ny dokotera mba hanao asa drafitra, hetsika mialoha, hitari-dalana birao sy hanatsarana ny fifandraisana dokotera-marary.
3D pirinty dia nanao fitaovana ara-pitsaboana maro, toy ny prosthetics, orthotics sy ny solon-tsofina, mora kokoa ny mahazo sy takatry kokoa ho an'ny besinimaro.
Voalohany indrindra, CT, MRI sy ny fitaovana hafa dia ampiasaina mba banjino sy hanangona ny 3D fanazavana ny marary. Avy eo, ny CT tahirin-kevitra dia naoriny indray ho 3D tahirin-kevitra amin'ny alalan'ny solosaina rindrambaiko (Arigin 3D). Farany, ny 3D angona natao ho modely mafy avy printy 3D. Ary afaka mampiasa modely 3D mba hanampy ny asa.
Medical fampiharana --- Preoperative fifandraisana
Fa avo-doza sy sarotra asa, preoperative fandaminana rafitr'asa dia tena zava-dehibe. Fomba nentim-paharazana, ny marary 'antontan-kevitra no azo amin'ny alalan'ny fitaovana fitarafana toy ny CT sy MRI, izay manompo ho toy ny fototry ny mpitsabo preoperative drafitra. Na izany aza, ny fitsaboana nahazo sary roa-amin'ny lafiny, izay sarotra ho an'ny marary ny mahatakatra, indrindra ho an'ny sasany sarotra fery, izay ihany no mamaky ny dokotera za-draharaha.
Ny 3D modely ny lesion azo mivantana natao pirinty tao amin'ny 3D printy, izay tsy vitan'ny hoe manampy ny dokotera marina tsara fandidiana fandrindrana sy hanatsarana ny daholo ny fandidiana, nefa ihany koa manamora ny fifandraisana misy eo amin'ny dokotera sy ny marary ny fandidiana drafitra. Ankoatra izany, na dia taorian'ny tsy fahombiazan'ny fitsaboana, 3D fanontam-pirinty iray traceable afaka manome fototra ho an'ny dokotera sy ny marary
Fa sarotra asa, dokotera dia afaka miady hevitra sy handamina ny asa araka ny modely 3D mba hahazoana asa tsara indrindra drafitra.
Teknika mpitari-dalana takela
Fandidiana mpitari-dalana board dia mpanampy fitaovana fandidiana araka ny marina drafitra hampihatra ny preoperative mandritra ny fandidiana. Izany dia efa ampiharina amin'ny tranga maro, toy ny hoe: tonon-taolana mpitari-dalana lovia, hazondamosina mpitari-dalana lovia, mpitarika am-bava amin'ireo fanjary tsaika lovia, ary ny toerany mpitarika takela-anatiny taratra loharanom implantation sombiny amin'ny fivontosana.
Ny fampiasana 3D pirinty preoperative famolavolana tari-dalana Endrika na osteotomy fanononana afaka haingana sy araka ny marina ny toerana misy ny lesion toerana, hampihenana iatrogenic ratra vokatry ny fahadisoana, mampihena ny fandidiana ny fotoana, hanafohezany ny fitsaboana fotoana ny marary, izay tena manan-danja ho an'ny marary voalohany asa sy ny fiandohan'ny sitrana
Fanarenana ny fitaovana ara-pitsaboana
Prosthetics, nandre SIDA sy ny hafa dia manana fitaovana ara-pahasalamana fanarenana kely batch, namboarina tinady, ary ny famolavolana koa sarotra, nentim-paharazana CNC fitaovana milina dia voafetra ny fikarakarana fiolahana sy ny fanontam-pirinty factors.3D teknolojia dia tsy voafetra ho ny rafitra sy ny tarehy, ary manana ny endri-javatra ny prototyping haingana, izay azo ampiharina ho amin'ny famolavolana ny vokatra manokana. Noho izany, 3D, tsy nisy fanontam-pirinty tsikelikely ny teknolojia ampiharina amin'ny sehatry ny fanarenana SIDA. Ankoatra izany, ny vola lany amin'ny famokarana tokana fanarenana namboarina fanampiana ho be mihena.
Fitsaboana fampiharana - orthodontics
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, rindrambaiko famolavolana-monina famerenana nify lasa malaza. Maro ny toeram-pitsaboana nify, na matihanina Solonify laboratoara mpanamboatra no nampiditra 3D teknolojia fanontam-pirinty, izay nitondra fiovana lehibe ho any amin'ny mpitsabo nify indostria eo amin'ny avo fametrahana mazava tsara, vidiny ambany sy ambony fahombiazan'ny. Ny tena fampiharana ny 3D teknolojia fanontam-pirinty tao amin'ny orinasa nify dia toy izao manaraka izao:
1. Dental Lasitra,
Maro ny toeram-pitsaboana nify na laboratoara mampiasa 3D mpanonta mba ho ohatra ny marary nify. Lasitra Dental dia azo ampiasaina ho lasitra mba hanampy ao amin'ny famokarana ny nify satro-boninahitra, etc., ary koa ny simulate, drafitra sy mampita ny fandidiana dingana amin'ny marary.
2. Dental amin'ireo fanjary tsaika,
Amin'izao fotoana izao, Hafanàm-po an implantation dia bebe kokoa malaza ao an-tsena. Ny antony dia ny implantation nomanina ny rindrambaiko marina kokoa, sy ny mpitari-dalana natao takela amin'ireo fanjary tsaika, ary namboarina tsara amin'ireo fanjary tsaika kokoa ho an'ny fampiasana pitsaboana.
3. Tsy Hita Maso orthodontics.
Raha oharina amin'ny vy nentim-paharazana tariby orthodontics, 3D pirinty orthodontics tsy hita maso dia tsy hita maso sy tsara tarehy, nefa koa mety kokoa ho an'ny marary nify ny fanjakana isaky ny dingana nandritra ny vanim-potoana orthodontic. Inona no kokoa, 3D pirinty orthodontics manan-tombony ny fomba fomban-drazana, izay miantehitra amin'ny traikefa indrindra indrindra ny mpitsabo nify.
4. Dental famerenana amin'ny laoniny. Ny satro-boninahitra vy raikitra tetezana azo atao amin'ny 3D teknolojia fanontam-pirinty, na resin modely ny nify tetezana natsipy ny very-savoka dingana, na mivantana mihitsy aza ny fanaovana pirinty ny nify 3D satro-boninahitra mety ho tratra.
3DSL-36O Hi (manaova boky 360 * 360 * 300 mm), fahombiazana avo, avo araka ny marina!